PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-04-08 - BATHINI ONGOTI?
Ilanga langeSonto - 2018-04-08 - Izindaba - THANDI ZONDI
Isazi kwezobudlelwano, esiphinde sibe ngumbhali wencwadi ethi: Embracing Conflict, upaula Quinsee, siphawula kwi- osebenzayo, okholwayo owesaba unkulunkulu, ongaphuzi, ongabhemi, ohlala KwazuluNatal. Makube ngonengane eyodwa ngoba nami ngineyodwa. Abadlalayo bangazihluphi. Ngitholakala kwethi 082 081 8935
* NGIYINTOKAZI eneminyaka engama-48 ubudala. Ngicela ukuxhunyaniswa nobaba oneminyaka esyukela kwengama-48 kuya kwengama-65 ubudala. Abadlalayo nabasemajele ngicela bangazihluphi. Ngitholakala kwethi: 073 103 3223
* NGINGOWESIFAZANE oneminyaka engama-40 ubudala. Ngifisa ukuxhunyaniswa nowesilisa oneminyaka engama-40 kuya kuma-60, ozaziyo ukuthi udingani empilweni. Ngiyaxolisa kwabadlalayo. Ngitholakala kwethi: 078 546 3134
* NGINGOWESILISA oneminyaka engama-32 Destiny Connect, sithi kumele uqhelelane nomndeni uma usuqala ukuba nomthelela ongemuhle empilweni yakho. Njengokuthi uzithola usunengcindezi noma uzizwa ukhathele emzimbeni nasemphefumulweni. Uthi uma ubona ukuthi uqhekeko nokungezwani okukhona emndenini wakho sekuqala ukukuphazamisa empilweni, zama ukuthi ilungiseke inkinga noma uziqhelelanise nawo. Uqhuba athi uma futhi ubudlelwano obungebuhle emndenini wakho sebuqala ukuba nomthelela emshadweni, kuphathina wakho nasezinganeni zakho kumele uqale udle amathambo engqondo ngesinqumo sokuziqhelelanisa nawo ngoba kusuke sekucaca ukuthi ubudala. Ngidinga ukuxhunyaniswa nowesifazane oneminyaka eyi-18 kuya kwengama-32 ubudala. Makube ngumuntu ohloniphayo, othembekile, owaziyo ukuthi ufunani empilweni futhi ongenayo ingane ngoba nami anginayo. Ngifuna okulungele ukuyohlola igazi. Ngicela bangangithinti abadlalayo, abaphuzayo, ababhemyo nabasemajele. Ngitholakala kwethi: 081 752 6979
* NGINGOWESILISA oneminyaka engama 29 ubudala, ngigqoka u-size 36 okhalo. Ngicela ukuxhunyaniswa nowesifazane oneminyaka eyi-18 kuya kwengama-25 ubudala. Makube yintokazi enhle, eme kahle, epakishile. Ngidinga umuntu omesabayo unkulunkulu, onesimilo, ozithobile futhi osebenzayo. Makube ngumuntu okulungele ukuyohlola igazi. Ngidinga ofuna uthando lweqiniso hhayi odlalayo. O-please call me, abaphuzayo, nababhemayo bangazihluphi. Ngitholakala ukungezwani okukhona kukubangela inkinga empilweni yakho.
Kanti umbhali wencwadi ethi Unfathered, udkt Disa Mogashana naye uvumelana nalo mbhali ongenhla.
Uthi kusuke sekuyisikhathi sokuba ushintshe ukucabanga ngobudlelwano basemndenini obunemiphumela engemihle empilweni.
Uqhuba athi lolu hlelo lobudlelwano lungakwenza uzizwe isithunzi sakho sidicileleke phansi futhi uzibone ungenamsebenzi walutho emndenini.
Uthi kubi futhi uma abantu bakini bezokuhleba, bakhulume kabi ngawe kodwa benze sengathi banendaba nawe ekubeni bekuphahleka ngodaka, bengcolisa igama lakho. Kuyenzeka futhi uthole ukuthi umndeni wakho ugcina ukuxabanisa ngisho nabanye abantu bangaphandle, abangewona amalunga omndeni. kwethi 072 796 1682
* NGINGOWESILISA oneminyaka engama-43 ubudala. Ngidinga ukuxhunyaniswa nowesifazane oneminyaka engama-30 kuya kwengama-43, ongenayo ingane noma enazo kulungile. Ulungile futhi nowadivosa, wamukelekile. Ngitholakala kwethi 083 980 5487
* NGINGOWESIFAZANE oneminyaka engama-40 ubudala. Angimude futhi angimfushane. Ngiyakhanya ngebala, ngiphila impilo yobu-lesbian. Ngicela uthando komunye wesifazane. Nginothando nami. Ngicela kube ngumuntu oneminyaka engama-40 kuya kwengama-45, ongahlali kude netheku. Makube ngumuntu ongaphuzi nongabhemi. Ngitholakala kwethi 074 411 4780
* NGINGOWESILISA oneminyaka engama-29 ubudala. Ngifisa ukuxhunyaniswa nowesi- le wazi ukuthi yisinqumo esinzima leso futhi esizoba nomthelela othile. Okumele ukwazi wukuthi usuke ungeke usaba yingxenye yempilo yabantu abathile uma uthatha isinqumo sokuphuma emndenini. Uthi kubalulekile ukuba ukwazi ukusimela isinqumo sakho.
“Uma ukhetha ukuqhelelana nomndeni wakho, kumele uqonde ukuthi lokho kuzoba nemiphumela nokuthi lokho kusho ukuthini, nokuthi uzokwazi yini ukumelana nemiphumela yakho,” kusho yena.
Ngokusho kwakhe, kungenzeka uzitshele ukuthi yisinqumo esikulungele lesi kodwa ngokuhamba kwesikhathi uzisole ngaso. “Uma usuzisola kumele futhi uzibuze ukuthi kungabe uzimisele yini ngokubuyela emuva uyokwakha kabusha ubudlelwano,” esho.
Udkt Mogashana umile ekutheni uma usuthathe isinqumo sokuqeda ngobudlelwano, kufanele ungabi nandaba ngoba lawo malungu omndeni oziqhelelanise nawo vele awanaqhaza empilweni kodwa axova umphefumulo wakho.
Uma kungukuthi kawukazimiseli ngokuhlukana namalungu omndeni, uthi indlela engcono ngeyokuziqhelelanisa nawo, hhayi ukuthi uqede ubudlelwano.
“Ningahlangana ezintweni ezibalulekile zomndeni njengasemngcwabeni kodwa ungaxhumani nawo nsuku zonke. Uma ekubhalela umyalezo waphendule uma uthanda,” kuqhuba yena.
tzondi@ilanganews.co.za fazane oneminyaka engama-23 kuya kwengama-27 ubudala. Angaba nengane eyodwa. Makube ngongaqhelile nakwahlabisa. Ngitholaka kwethi 082 640 6782
* NGINGOWESIFAZANE oneminyaka engama-45 ubudala. Angiphuzi futhi angibhemi. Ngicela ukuxhunyaniswa nowesilisa oneminyaka engama-45 kuya kwengama-47 ubudala. Ngitholakala kwethi 074 463 1458.
ISITHOMBE NGABE: ROLLING OUT
UKUNGEZWANI emndenini kungakudalela ingcindezi, kugcine kuphazamiseke impilo yakho.
ISITHOMBE NGABE: TEJUWRITES
AYIKHO into enhle njengomndeni obumbene, ozwanayo futhi owenza izinto ngokubambisana.